War - waa maxay farqiga u ah shaabad qaadista iyo daboolka birta birta ah?
Waa maxay Farqiga u sita shaabadda iyo daboolka birta birta ah?
Farqiga shaabadda sidata iyo daboolka birta
Shaqadu way ka duwan tahay
- giraanta shaabadda sidata ayaa u ah waxqabadka shaabaddeeda iyo nolosha adeeggu waxay leedahay muhiimadda muhiimka ah.
- Qaadashada daboolka boodhka ayaa ah inay ka hortagto qaadista boodhka iyo qashinka kale ee sidaas u saameeya shaqada.
Maaddadu way ka duwan tahay
giraanta wax lagu xidho waxay ka samaysan tahay caag. Waxyaabaha qaadaya daboolka aan ciidda lahayn waa saxan bir khafiif ah.
Daboolka boodhka ayaa ah guri guyaal ah, oo badanaa laga shaabadeeyo warqad khafiif ah oo bir ah, oo ku dhegan hal giraan ama Washer of the sita oo u fidiya dhinaca giraanta kale ama Washer, taasoo qarinaysa booska gudaha ee qalabka iyadoo aan lala xiriirin giraan kale ama Dhaqe.
Midna waa mid aan carro-caddeyn karin, midna waa hawo-qaadasho. Ka Hortagga Boodhku waa ka hortagga boodhka gudaha mootada; shaabadaysan oo keliya boodhka dibedda ma soo geli karo oo dufanka gudaha ku jiraa ma fududa in la baxo. Dufanka aan nadiifka ka ahayn banaanka ma fududa in lagu shubto.
Ficil ahaan farqiga u dhexeeya labadaas ma aha mid aad u weyn. Dhalista ayaa guud ahaan ku jirta gudaha iyo dibedda daboolka saliidda, ayaa doorkan ciyaaray, kaliya xaalado gaar ah oo keliya ayaa loo baahan yahay. Z loogu talagalay carrada oo aan u adkeysan iyo S oo loo xirxirayo (FS oo loo yaqaan 'ring ring seal' iyo 'LS oo ah shaabad caag ah)
Waqtiga boostada: Jan-19-2021